Advanced Excel Formula and Functions Course | Myanmar Online School
Advanced Formula and Functions Course
For Advanced Excel Users
Microsoft Excel - Advanced Excel Formulas & Functions Course
75 ခုကျော်တဲ့ Excel formulas နဲ့ function တွေကို ကျွမ်းကျင Microsoft Excel instructor တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုအင်ဒရူးမှ လက်တွေ့တဆင့်ချင်းစီ သင်ပြပေးမယ့် အတန်းဖြစ်ပါတယ်။ (Excel 2010 မှ 2019 အထိ cover ဖြစ်ပါတယ်)
•	Excel လို တသားတည်း စဉ်းစားတတ်ပြီး Excel ထဲမှာ ဘာမှ မရှိတဲ့ အဆင့်ကနေ powerful and dynamic formula တွေကို ရေးတတ်အောင် လေ့လာရပါမယ်။
•	Excel နဲ့ပဲ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ workflow ကို Automate ဖြစ်အောင်၊ ပြေပြစ် သွက်လက်အောင်၊ လုံးဝ revolutionize ဖြစ်အောင် အသုံးချတတ်လာမယ်။
•	အခြားအတန်းတွေမှာ သင်မတွေ့ရမယ့် tips တွေ၊ tools တွေနဲ့ case studies တွေကို ကျွမ်းကျင်လာဖို့ အာမခံတယ်။
•	Excel နဲ့ပတ်သတ်လို့ Online Platform(www.myanmaronlineschool.com) မှာရော၊ ပြင်ပ ကုမ္ပဏီနဲ့ Classroom training တွေမှာ သင်ကြားနေတဲ့ instructor ထံမှ ပျော်စရာကောင်၊ interactive လည်းဖြစ်ပြီး၊ အလွန်ထိရောက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို တွေ့ရမယ်
•	Online တက်ရောက်လေ့လာသူ၊ အတန်းလာတက်သူအားလုံးအတွက် project file, quiz တွေနဲ့ homework exercises တွေကို www.myanmaronlineschool.com မှာ LIFETIME access ပေးထားလို့… ဒီလိုအတန်းမျိုးကို နားမလည်(သို့)မေ့သွားလို့ နောက်တစ်ကြိမ် သင်တန်းကြေးတွေ ပေးပြီး အတန်းထပ်တက်စရာ မလိုတော့ဘူး။
•	Date တွေ၊ text field၊ value နဲ့ array တွေကို analyze လုပ်နိုင်တဲ့ formula တွေကို တည်ဆောက်တက်လာမယ်။
Excel ကို နည်းနည်းပဲ သဘောပေါက်တဲ့သူ၊ သင်တန်းတက်ထားပေမယ့် အလုပ်မှာ ပြန်အသုံးမချတတ်သူတွေအတွက် မှန်ကန်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ရောက်လာတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဒီအတန်းက Excel ကို ရိုးရိုး စာရင်းဇယားဆွဲတဲ့ program တခုကနေ dynamic ဖြစ်ပြီး powerful analytics tool တခုအဖြစ်ပါ Excel ကို အသုံးချတတ်အောင် Advanced formulas နဲ့ functions တွေကို နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။Excel အတန်းအများစုက formula တခုစီဟာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကို အဓိက focus လုပ်နေချိန်မှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လက်တွေ့ဆန်ပြီး၊ ပြင်ပနဲ့ ချိတ်မိစေတဲ့ ဥပမာတွေကို သုံးပြီးတော့ ဘာကြောင့် ဒီ formula တွေက သုံးရတာ လန်းတယ်၊ သူတို့ကို ဘယ်လို နည်းမျိုးစုံနဲ့ သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုပဲ သင်ပါမယ်။ function နဲ့ formula syntax တွေကို ကြက်တူရွေးလို ရွတ်ပြတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကျွန်တော့် training ကို ပုံပျက်အောင် သင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Excel လို တွေးတတ်အောင်(THINK like Excel) သင်ပေးမှာပါ။
ဒီအတန်းအပြီးမှာ သင့်အနေနဲ့ သပ်ရပ်ပြီး professional ဆန်တဲ့ formula နဲ့ function တွေကို အကြမ်းထည်ကနေ စတင်ပြီး ရေးသားနို်င်လာပါလိမ့်မယ်။
•	Dynamic tool တွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကို filter စစ်တာ၊ ပြသတာနဲ့ analyze လုပ်ဖို့ Excel dashboard တွေကို အလွယ်တကူ တည်ဆောက်နိုင်လာမယ်။
•	Formula ကို အခြေခံတဲ့ formatting rule တွေနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်နိုင်လာမယ်
•	lookup, index နဲ့ match function တွေကို အသုံးပြုပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း Source ပေါင်းစုံကလာတဲ့ data တွေကို ပေါင်းစပ်နိုင်လာမယ်။
•	API တွေကနေ တဆင့် real-time data ကို Excel ထဲကို ဆွဲခေါ်တတ်လာမယ်(ဥပမာ- မိုးလေဝသ၊ စတော့စျေးတွေနဲ့ လမ်းညွှန် စသည်..)
•	Date၊ Times, Text နဲ့ Array တွေကို ပိုင်နိင်စွာ အသုံးချနိုင်လာမယ်
•	Excel ထဲက cell formula တွေနဲ့ function တွေကို သုံးပြီး ပျင်းစရာကောင်း၊အချိန်လည်းကုန်တဲ့ analytics အလုပ်တွေကို အလိုအလျောက် စေခိုင်းတတ်လာမယ်( ဒီအတန်းမှာVBA သိဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး)
ဒီအတန်းမှာ အောက်ပါ Excel formula နဲ့ function တွေကို ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာကြမယ်-
•	Formula based formatting
•	Powerful analytics tools and formulas like INDIRECT, HYPERLINK, WEBSERVICE & FILTERXML
•	အခြေခံ basic skill ရှိပြီးတော့ အရမ်းအရမ်းကို ကျွမ်းကျင်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ Excel user တွေ
•	Analytics လုပ်တဲ့ အရည်အချင်းကို ပိုတောက်ပြောင်အောင် လုပ်ဖို့၊ data တွေနဲ့ ပိုထိရောက်စွာ အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ မိမိရဲ့ career ကို နောက်တဆင့်မြှင့်ချင်သူတွေ
•	Excel analytics training နဲ့ပတ်သတ်လို့ ဆရာ၊ကျောင်းသား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၊ ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ၀ိုင်းဝန်းအဖြေရှာ၊ highly interactive approach နဲ့မှ သင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီအတန်းကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။
1.Getting to know excel 2016 (7:51)
2.Introduction to Cloud Computing (25:08)
3.Planningaworkbook (15:58)
4.Entering Data (18:14)
5.Using Sum Function (7:13)
6.Formatting the Worksheet (17:16)
7.How to use the name box and selection methods (6:39)
8.Insertapie chart to the sheet (15:01)
9.Document Properties (5:10)
10.Printingaworksheet andachart (21:43)
11.Apply your knowledge (16:15)
12.Extend your knowledge (5:44)
13.Analyze,Correct and Improve (17:48)
14.Sam Project 1a (15:19)
15.Sam Project 1b (11:39)
Game play with MS App (27:52)
Gamification with Excel (7:38)
Google Groups and MS Office Intro (22:31)
Lab-1_Fourth Quarter Revenue Analysis (14:28)
Lab-2_MPT Yearly Sales Analysis (15:02)
Lab-3.1_Travel Expense Report (12:50)
Email Marketing (1:07)
Unit 01_Introduction to the Course
1.About the Course (2:26)
Unit 02_Excel Formula 101
1.Section Outlines (3:57)
2.Function Library and Auditing Tools (9:48)
3.Evaluate Formula (2:05)
4.Formula Syntex (5:55)
5.Reference Types (12:13)
6.Common Excel Errors (8:05)
7.IFERROR Function (4:01)
8.Useful Shortcuts (8:37)
9.Data Validation (8:24)
10.Volatile Functions (3:56)
Unit 03_Conditional Statements
Section-3-Logical-Operators - Start
1.Introduction to Logical Functions (2:00)
2.Anatomy of the if statement (5:19)
3.Nested If Functions (16:07)
4.And OR Operators (10:18)
5.Not Operator (5:25)
7.IS Formulas (4:47)
8.Homework for Logical Functions (3:43)
Unit 04_Stat Functions
2.Basic Stat Functions (10:48)
4.Random, Random Between (3:38)
5.Sumproduct Function (7:10)
Unit 05_Lookup Functions
2.Working with named arrays (5:16)
3.Row,Rows,Column,Columns Functions (7:19)
4.Vlookup and Hlookup Functions (9:11)
5.Vlookup and Hlookup Functions_Practice-1 (5:24)
6.Vlookup Function with Exact Match (5:54)
10.Index Function (2:59)
11.Match Function (2:40)
12.Index Function Practice (5:40)
13.Match Function Practice (4:46)
14.Combining INDEX,MATCH Function (8:02)
Hi, I’m Ko Andrew.
I will be teaching you the Advanced Excel Formula and Functions in this course.
ဘဏ်များမှ တဆင့် သင်တန်းကြေးပေးသွင်းလိုသူများအတွက် အောက်ပါ ဘဏ်များမှာ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ‌Wave Money မှ တဆင့်လည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်နည်းနှင့် မဆို ပေးသွင်းပြီးပါက ဖုန်း ၀၉၉ ၆၅၄၀ ၁၂၂ ၊ ၀၉ ၂၆၃ ၂၈၁ ၉၈၉ တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဘဏ်ချလန်(သို့မဟုတ်) ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား တစုံတရာကို ပေးပို့ပေးကြစေလိုပါတယ်။